संसद बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks संसद बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने
काठमाडौं । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोधपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थागित भएको छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कार्यव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेपछि बैठक स्थागित भएको हो ।
कार्यसूचीअनुसार अध्यादेश पेस गर्न कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई रोस्टममा जान सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुमति दिएसँगै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले विरोध जनाउँदै अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी थिइन् । त्यस्तै, सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।
संवैधानिक परिषद्को काम कार्यव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल जसपाले रोस्टममा नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पुनः १० मिनेटपछि बैठक सुरु गर्न सकेनन् । उनले सूचना टाँस गरी बैठक २६ फागुन दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै पहिलो बैठकमै नेकपाको दाहाल र नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसदहरू उभिएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन् ।
उनले यो अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएकाले अध्यादेश संसद्भित्र प्रवेश नगराएर तुरुन्तै फिर्ता लैजानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट माग गरिन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि पनि पहिलो बैठकमा नै सरकारले संसदीय अभ्यासलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउन नदिएर व्यवधान खडा गरेको नेतृ भुसालले बताइन् ।
सभामुखले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुनः कांग्रेसका सांसद उभिएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिएका थिए । प्रमुख सचेतक खाँडले संविधानविपरीत आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । विरोधकाबीच मन्त्रीले अध्यादेश पेस गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद नाराबाजी गर्दै बेल घेर्न आइपुगेका थिए । सांसदले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
यसअघि नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सांसद भीम रावललले सर्वोच्चको फैसलालाई कानुनी राजनीतिक भनेर प्रश्न उठाए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै रावलले भने, ‘कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ? यदि नेकपा अवैधानिक हो भने प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ? कुन सरकारको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
मेस्सीको उस्तै लय
मड्रिड । झन्डै तीन महिनाको विश्रामपछि खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो हुने हो त्यो सबैको कौतूहलको विषय बनेको थियो । तर, कौतूहल अब मेटिएको छ ।...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका ७७ जिल्लामध्ये २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सरकारले ५ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत...
प्रमुख Dhruba Lamsal - May 2, 2020 0
महाेत्तरी । महोत्तरीको भङ्गाहा र बर्दिवास नगरपालिका जोडिएका बस्तीमा अज्ञात रोगले मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या ११ पुगेको छ । आज बर्दिवास–१२ स्थित इटाभट्ठामा काम गर्ने...
ऊर्जामन्त्री पुनको भारतसंग आग्रह : अब हाम्रो विद्युत किन्नुस्
अर्थ Dhruba Lamsal - March 11, 2020 0
काठमाण्डौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले छिमेकी भारत समक्ष नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि नेपालले भारतबाट विद्युत खरिद...
समाज Roshan Shrestha - May 29, 2020 0
भक्तपुर । कोरोनाको सङ्क्रमण भएपछि पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएकी भक्तपुर नगरपालिका–९ की ४२ वर्षीया महिला जनप्रतिनिधि छ दिनमै कोरोनामुक्त भएर घर फर्कनुभएको छ । यही...
भर्खरै भक्तबहादुर शाही - April 17, 2021 0
कोरोनावाट जोगाउन थुनुवालाई धरौटीमा हिरासतमुक्त
प्रदेश २ Dhruba Lamsal - March 24, 2020 0
जनकपुरधाम । कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमलाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले थुनुवालाई धरौटीमा हिरासतमुक्त गर्न सुरु गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - October 24, 2020 0
निजामती सेवा ऐनको प्रावधान विरुद्ध देशभरका नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा
काठमाडौं । निजामती सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको मस्यौदाप्रति निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आपत्ति...
पूर्णभक्त दुवाल - April 13, 2021